Hain-tany mahatsiravina Mitsipatsipaka ny omby any Androy
Efa notaterina teto omaly, fa vidiana 100Ar ny iray zinga amin’ny rano any Androy raha misy ary 2.000Ar ny iray zerikanina 20litatra.
Miparitaka indray ankehitriny ny vaovao momba ny fahafatesan’ny biby noho ny tsy fisiana rano sy orana hatrany ary maina ny voly. Tsy mahazaka ny omby izay sokajiana ho biby matanjaka.. Mety hitsipatsipaka hatramin’ny olona raha izao no mitohy, hoy ny fampitam-baovao. Olana efa an-jatony ny any Atsimo, saingy tsy mety mivaha mandrak’androany na nisy aza ny tetikasa maro samihafa, toy ny fandavahana vovo, ny tetikasa fitarihan-drano izay tsy re firy intsony ny akony. Anisan’ny nataon’ny firenena maro tahaka an’i Israel, Irak, Arabie Saoudite, Koweït,… ny fanadiovana ny ranomasina ho lasa rano azo sotroina na ny “dessalement”. Mitentina 300 tapitrisa euros (1 200 000 000 000Ar) ny ozinina fanaovana an’io, izay tena midangana tokoa, saingy azo eritreretina ihany ny tokony hahavitana azy, raha tsara tantana sy tena misy tamberim-bidy amin’ny firenena ny harena na ambony na ambanin’ny tany mivoaka avy eto Madagasikara. Re omaly fa hisy ny fandatsahana orana artifisialy any Androy mba ho vahaolana vonjimaika eo anatrehan’ny loza mihatra any an-toerana.